Ndị mmadụ na -echekarị ajụjụ ndị a mgbe ha na -azụta sofa ọhụrụ maka ụlọ gị, kedu ụdị nke na -adọrọ mmasị karị, kedu ihe na -adịte aka, sofa akpụkpọ anụ ma ọ bụ akwa nke ka mma? N'ezie, enwere ọtụtụ ihe ị ga -atụle ma mmefu ego, nkasi obi, ịke, wdg ka emechara ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ndụ gị. In terms of the leather vs…
Ihe ndina dị ka ọrụ dị mkpa nke arịa ụlọ dị oke mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị. Ihe ndina dị nro ma dị nro na -ekpebi ịdị mma ụra gị. Ọ bụrụ na akwa ahụ siri ike ịrahụ ụra ma zuru ike, ọ ga -eme ka ike gwụ gị echi nke na -emetụta oke ọrụ mmadụ. There are a wide variety of types for the bed…
Okwu Mmalite oche oche eletriki nwere bọtịnụ dị iche iche. Bọtịnụ elu na ala dị na bọtịnụ nwere ike ijikwa elu na ala azụ sofa. Site na ngbanwe nke sofa eletrik, ọnọdụ onye nọ na kwushin ga -agbanwekwa, dị ka azụ azụ. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ ga -emegharị hips ha azụ, and vice…
Enwere iwu ise maka mmezi matarasị. Enwere m olile anya na ọ ga -enyere gị aka iwepụta obere oge iji banye n'abalị ka mma karịa uzuzu, izizi, etc RULE 1: Kanye akwa akwa gị kwa ụbọchị Kwa abalị, onye ọ bụla n'ime anyị na -atụfu ihe dị ka ọkara otu pint mmiri mgbe anyị na -ehi ụra, which creates an appealing environment for dust mites and can lead…